Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Mbudzi 04, 2020
Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevatanhatu.
Mutori wenhau ane mukurumbira munyika, Hopewell Chin’ono, uyo akasungwa zvakare nezuro otarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana mushure mekupomerwa imwe mhosva itsva.
Magweta ari kumirira Muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vana, anoenderera mberi nekubvunzurudza mupurisa ari kuferefeta nyaya yekunzi vasungwa ava vaida kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo.
Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika iyi, vachiri kutungamira muzvigaro zve electoral college zvavawana zvichienzaniswa nezvigaro zvawanikwa pari zvino nemumiriri weRepublic Party, uye vari mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica.
Bazi rezvehutano rochema chema nemari shoma yariri kutarisira kupihwa mubhajeti regore rinouya
Kambani yeUnited Refineries inovhara mabasa ayo nepamusana pedambudziko remvura rakatarisana neguta reBulawayo